Asɔrefi a wɔansan ansi nti, wɔkaa wɔn anim (1-11)
‘Mo de, bere aso ama mo sɛ motena adan a mode nnua asiesie mu no mu, ɛnte saa?’ (4)
“Nea moreyɛ no, munnwen ho yiye” (5)
Mudua aba pii, nanso nnɔbae kakraa bi na mutwa (6)
Nkurɔfo no tiee Yehowa (12-15)
1 Ɔhene Dario ahenni afe a ɛto so abien, bosome a ɛto so asia no da a edi kan no, Yehowa faa odiyifo Hagai* so+ ka kyerɛɛ Sealtiel ba Serubabel+ a ɔyɛ Yuda amrado, ne Yehosadak ba Yosua a ɔyɛ ɔsɔfo panyin no sɛ: 2 “Nea asafo Yehowa aka ni, ‘Ɔman yi ka sɛ, “Bere nnya nsoe sɛ yesi* Yehowa fi* no.”’”+ 3 Na Yehowa asɛm san faa odiyifo Hagai+ so bae sɛ: 4 “Mo de, bere aso ama mo sɛ motena adan a mode nnua asiesie mu no mu bere a ofi yi abubu, ɛnte saa?+ 5 Enti nea asafo Yehowa aka ni, ‘Nea moreyɛ no, munnwen ho yiye.* 6 Mudua aba pii, nanso nnɔbae kakraa bi na mutwa.+ Mudidi, nanso mommee. Monom, nanso ɛnso mo. Mufura ntama, nanso mo ho nyɛ mo hyew. Ɔpaani de n’akatua gu kotoku a ase nyinaa atutu ntokuru mu.’” 7 “Nea asafo Yehowa aka ni, ‘Nea moreyɛ no, munnwen ho yiye.’* 8 “‘Momforo nkɔ bepɔw so nkobu nnua mmra,+ na munsi ofi no,+ na m’ani begye ho, na ɛbɛhyɛ me anuonyam,’+ Yehowa asɛm ni.” 9 “‘Mohwɛɛ nneɛma pii kwan, nanso kakraa bi na mo nsa kae; na bere a mode baa fie no, mihuw gui.+ Adɛn ntia?’ asafo Yehowa asɛm ni. ‘Efisɛ me fi abubu, nanso mo de, obiara di akɔneaba de hwɛ ne fi yiye.+ 10 Ɛno nti, ɔsoro amma mo obosu, na asaase nso amma mo nnɔbae. 11 Na mefrɛɛ ɔpɛ fitaa baa asaase so, ne mmepɔw so, ne hwiit,* ne bobesa foforo so, ne ngo so, ne asaase so afifide so, ne onipa so, ne nyɛmmoa so, ne mo nsa ano adwuma nyinaa so.’” 12 Sealtiel ba+ Serubabel,+ ne Yehosadak+ ba Yosua a ɔyɛ ɔsɔfo panyin, ne ɔmanfo a aka no nyinaa tiee Yehowa wɔn Nyankopɔn, na wotiee odiyifo Hagai nsɛm no, efisɛ Yehowa wɔn Nyankopɔn na ɔsomaa no; na Yehowa nti, nkurɔfo no fii ase suroe. 13 Ɛnna Yehowa somafo Hagai de asɛm a Yehowa de asoma no no too ɔman no anim sɛ: “‘Meka mo ho,’+ Yehowa asɛm ni.” 14 Afei Yehowa kanyan+ Sealtiel ba Serubabel a ɔyɛ Yuda amrado+ no, ɔkanyan Yehosadak ba Yosua+ a ɔyɛ ɔsɔfo panyin no, na ɔkanyan ɔmanfo a aka no nyinaa. Na wɔbae, na wofii ase yɛɛ asafo Yehowa wɔn Nyankopɔn fi no ho adwuma.+ 15 Ná ɛyɛ Ɔhene Dario+ ahenni afe a ɛto so abien, bosome a ɛto so asia no da a ɛto so 24.
^ Ɛkyerɛ, “Nea Wɔwoo No Afahyɛ Da.”
^ Anaa “yɛsan si.”
^ Anaa “momfa mo koma nsi mo akwan so.”